(Qahira) 21 Luulyo 2019. Dowladda Algeria ayaa soo daad gureysay taageerayaasheedii niyadda u dhisayay xulka qaranka dalkaasi oo ciyaartii kama dambeysta ahayd ee Koobkii qarammada qaaradda Afrika 2019 Magaalada Qaahira kula yeeshay xulka Senegal, isla markaana 1-0 ay guushii ku raacday Algeria.
Markii ay Algeria xaqiijiyeen hanashada Koobkii qarammada Afrika sanadkan, waxaa taageerayaasha dagaalyahannada Saxaraha (Algeria) ay isku shubeen garoonka diyaaradaha Qaahira.
Durbadiiba waxaa la qaban qaabiyay sidii loo nidaamin lahaa 7,000 oo taageerayaal Algerian ah, dibna loogu celin lahaa dalkooda hooyo.
Dowladda Algeria ayaa 33 duulimaad u soo dirtay muwaadiniinteeda, waxaana 24 ka mid ah duulimaadyadaasi ay ahaayeen diyaaradaha rakaabka ee caadiga ah, halka 9 kalena ay ahaayeen diyaaradaha ay isticmaalaan ciidammada cirka ee Algeria.
Soo gurya noqoshadan reer Algeria ayaa qaadatay 36 saacadood, waxaana dhammaantood iyagoo nabad qaba ay ku laabteen dalkoodii hooyo, iyagoo faraxsan oo xulkooduna uu soo xaqiijiyay Koobkoodii labaad ee qaramada qaaradda Afrika oo ay hadda ka horna ku guuleysteen sanadkii 1990-kii.
Kooxda Real Madrid oo iska diiday LIX dalab ee laga soo gudbiyay Marco Asensio